INkundla ePhakamileyo ibhengeza ukuba i-canon yedijithali ayisebenzi | Iindaba zeGajethi
Kudala sabhengeza ukuba iNkundla yezoBulungisa ye-European Union yagweba ngoJulayi ngokuchasene nento ebizwa ngokuba yi-canon yedijithali. Ngaba ngoku INkundla ePhakamileyo yaseSpain ethathe isigqibo sokuthetha malunga noku, ikwenza kucace ukuba uluhlu lwekhompyuter olusetyenzisiweyo ukusukela ngo-2012 alunantsingiselo. Ngale ndlela, lixesha lokuba ulahle inxenye yoMmiselo wasebukhosini ka-1657/2012 obandakanyileyo kuHlahlo-lwabiwo mali lukaRhulumente jikelele ukuba ahlawule ababhali ngezenzo zobuqhetseba, okanye mandithi iikopi zabucala zemisebenzi yabo abayenzileyo.
Ngale ndlela, iyeka ukuxhasa ishishini lePleistocene elingafunanga okanye lifune ukuziqhelanisa neetekhnoloji ezintsha, ezo zamkelwe kakuhle, ezinje ngeSpotify okanye iNetflix, umxholo ohlawulelweyo kwimfuno ngobhaliso lwenyanga nenyanga kwaye usebenze ibhalbhu yokukhanyisa ihlawule umxholo kubasebenzisi abathanda ubuqhetseba. Kungenxa yokuba masijongane nayo Akukho mntu ufuna ukuhlawula i-20 Euro ngeCD yomculo eneengoma ezili-10, xa unayo yonke umculo oyifunayo kwiSpotify okanye kwiApple Music ngee- € 9. Ngale ndlela, isigwebo siyalela ukungasetyenziswa komthetho wasebukhosini ngokufanelekileyo.
Ngale ndlela, ngokuyinxenye usiqinisile isibheno esifakwe ngu-Egeda, Dama noVegap, amaziko amathathu aqondayo ukuba uHlahlo-lwabiwo mali Jikelele lweLizwe ayisiyondlela ekufuneka iqinisekiswe ngayo inzuzo yeenkampani ezinelungelo lokushicilela, nekuyizo ekufuneka zingenelele ezabo iindlela zokukhusela ukuthintela ubuqhetseba.
Ukukunika umzekelo, kufana nokuba ndivula ivenkile yeempahla, andibeki ndlela yokhuseleko enjengezaphetha okanye iilebheli, kwaye ndibamema ukuba "bebe" imixholo yevenkile. Ngale ndlela, uRhulumente uya kubeka irhafu rhoqo ngonyaka kubemi ukuze ahlawule ilahleko zam, ayenzi ngqondo ingako ...
INkundla ePhakamileyo iphela ngokuzibeka ngendlela efanayo naleyo Inkundla yezoBulungisa ye-EUKodwa asazi ukuba oku kuyakuchaphazela njani amaxabiso eendaba ezithile zokugcina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » INkundla ePhakamileyo ibhengeza ukuba i-canon yedijithali ayisebenzi
I-iPhone ye-2017 inokubeka izikrini ze-intshi ezi-5 kunye no-5,8